Rape in nepal Archives - नेपाल आज
अर्थ बजार कर्पोरेट
नेपाल आज बिशेस
मङ्गलबार, १२ बैशाख २०७४
Rape in nepal	अपराध सुरक्षा
बलात्कृत युवतीको रद्द भयो बिहे
Posted on: February 15, 2017Posted by: Tirtha Khanal
फागुन ४ । कपिलवस्तुको पकडी गाविसमा गत साता बलात्कृत किशोरीको बिहे रद्द भएको छ । १७ वर्षीया किशोरीको फागुन ३ गते विवाहका लागि तिलक तय थियो । केटी पक्षले सार्वजनिक भए विहे प्रभावित हुने डरले घटना लुकाएको थियो । तर बलात्कारमा संलग्न युवाले नै घटना सार्वजनिक गरेपछि विवाह रद्द भएको छ । केटा पक्षले घटना […]
कोकमा रक्सी मिसाएर जब दलाल उनीमाथि जाइलागे
Posted on: January 12, 2017Posted by: Tirtha Khanal
पुस २८ । दलालका कारण युवतीहरु गर्भवती बनेर देश फर्किएका उदाहरण थुप्रै छन् । उरुलाई आश्चर्य लागे पनि हामीलाई त यस्ता केस नर्मल लाग्न थालिसक्यो । पौरखी नेपालकी अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन् । यस्ता गम्भीर केस त कति आउछन् कति सुनसरीकी सरिता नाम परिवर्तन यस्तै एक पीडित हुन् जो दलालको पासोमा पारेर अवैध बाटो रोज्दै कुवेत […]
यी युवक जो बलात्कारपछि युवतीलाई होटलमै थुनेर भाग्छन्
Posted on: December 20, 2016Posted by: Tirtha Khanal
पुस ५ । नेपाल प्रहरीले हालै एउटा यस्तो युवकलाई पक्राउ गरेको छ, जसको धन्दा देख्दा पनि अचम्म लाग्छ । उनको यस्तो धन्दाले अनाहकमै धेरै युवतीले शारीरिक र मानसिक सास्ती बेहोर्नु परेको छ । कतिपयले त बलात्कारको शिकारसमेत हुनु परेको छ । ती व्यक्ति हुन् अभय खड्का । प्रहरीकोमा बताएअनुसार उनको ठेगाना काभ्रे श्यामपाटी हो । तर […]
झारफुकको निहुँमा बलात्कार
Posted on: November 21, 2016Posted by: netra
मंसिर – ६ । बनेपामा झारफुकको निहुँमा किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ५८ वर्षीय प्रेम तिमल्सिनाविरुद्ध आज प्रहरीले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरेको छ । पीडितका आफन्तले दिएको उजुरीका आधारमा तिमल्सिनाविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धुलिखेलका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनराज राईले जानकारी दिए। बनेपा–५ मा अस्थायी रुपमा बस्ने तिमल्सिनालाई शनिबार […]
पिताले बलात्कार गरेपछि मामाको शरणमा पुगेकी किशोरी मामाबाटै बलात्कृत
Posted on: October 27, 2016October 27, 2016Posted by: Tirtha Khanal
कात्तिक ११ । बेल्टार बसाहा नगरपालिका बसाहाकी एक १३ वर्षीया किशोरीलाई पटक–पटक बलात्कार गर्ने किशोरीको बुबा, मामा र गाउँले दाजुलाई जिल्ला अदालत उदयपुरले जेल सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत उदयपुरका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको एकल इजलासले किशोरी बलात्कार गर्नेहरुविरुद्ध हालै जेलसजाय र आर्थिक जरिवानाको फैसला गरेको अदालतका स्रेस्तेदार रितबहादुर मगरले बताए । किशोरी बलात्कार […]
एसएसलीका बेला सामुहिकरुपमा बलात्कृत पूजा बोहोरा प्रथम श्रेणीमा प्लस टु उत्तिर्ण
Posted on: September 13, 2016Posted by: Tirtha Khanal
बैतडीकी पूजा बोहोराका लागि सामान्य हिसावले जीबन अघि बढेको भए प्लस टु ठूलो कुरा हुंने थिएन । नत उनको सफलता समाजका लागि उतिसारो चासोको विषय हुन्थ्यो । तर, उनको जीबनमा अकल्पनिय घटना आइलाग्यो । २०६८ सालमा एसएसली दिन जाँदा उनी सामुहिक बलात्कारको शिकार भइन् । रगतपच्छे भएकी उनको उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइयो । मानसिकरुपमा विक्षिप्त […]
पापी शिक्षक आफैले पढाउने विद्याथीलाई राजधानीकै मुटुमा बलात्कार
Posted on: September 8, 2016Posted by: Tirtha Khanal
भदौ २३ । सात कक्षामा अध्ययनरत किशोरीलाई शिक्षकले स्कुलकै होस्टेलमा बलात्कार गरेका छन् । बालाजु वसन्तनगरस्थित अभियान पब्लिक स्कुलका शिक्षक डम्बरबहादुर खड्काले विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेका हुन् । खड्कालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले पक्राउ गरेको छ । स्कुल परिसरमै रहेको होस्टेलमा गत १७ भदौको बेलुका खड्काले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बर्दिया घर भई सोही […]
१६वर्षमुनिका बालिका बढी हिंसाको सिकार
Posted on: June 24, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – १० । महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)को एक अध्ययनले १६ वर्षमुनिका बालिका बढी बलात्कारलगायतका हिंसाको सिकार हुने गरेको देखाएको छ । महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसामाथि ओरेकले गर्ने मासिक अध्ययनअनुसार जेठ महिनामा भएका २०६ घटनामध्ये आधाजसो घटनाका पीडित १६ वर्षमुनिका बालिका रहेका छन् । वैशाख महिनाको अनुपातमा जेठ महिनामा महिलामाथिको हिंसामा वृद्धि भएको देखिएको छ । […]
लोकप्रिय समाचार ताजा खबर	६ विधामा वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने तयारीमा रहेकाे फिल्म ‘जालो’को यस्तो छ ट्रेलर
एनटीसीका सबै सेवा एउटै काउन्टरबाट, कार्यालयभित्र फेसबुक प्रतिबन्ध
बजेटपछिको निर्वाचनमा एमालेको गम्भीर असहमति, आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने
जानकी विवाहपञ्चमीमा राष्ट्रिय बिदा माग
निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न ८८९ स्वास्थ्यकर्मीकाे निवेदन
धुर्मुस-सुन्तलीले ‘मिनि नेपाल’ बनाउने
बाजुरामा पनि भूकम्प
विश्व औलो दिवसः सिद्धार्थनगर औलोको उच्च जोखिममा
द्वन्द्वपीडितले पाउने रकम अर्कैले लिए
मुसहरका बालबालिका विद्यालय जाँदैनन्
© Nepalaaja 2017. All rights reserved. This is the temporary site for the Nepalaaja. We Will be back soon with the Brand New Site.